Raha manana fanontaniana, fanehoan-kevitra na ny fandinihana, azafady fenoy ny lasitra eo ambany. Na izany aza, raha mitady rivotra sata manokana fiaramanidina fiaramanidina fanompoana akaiky anao ianao any amin'ny
Afaka manampy anao hahazo bebe kokoa amin'ny alalan'ny aterineto mpanjifa aterineto barotra dokambarotra.
dingana 1 ny 3
Lazao anay ny Business*
Nahoana no ny mpanjifa misafidy ny hividy avy aminao noho ny mpifaninana? (ho voafaritra tsara momba ny Sarobidy kevitra)*
Inona no mahazatra varotra dingana / tsingerin'ny? EX: mpanjifa antso, dia mameno iombonana, dia mametraka fotoana sns*
Inona no fohy sy lavitra ezaka tanjona ny orinasa?*
Inona no vokatra na ny asa fanompoana no tianao mivarotra bebe kokoa ny?*
Inona no eo ho eo miavaka sarobidy ny eo ho eo mpanjifa? Izany no mahasoa ny fiainana izany mpanjifa*
Iza no lafatra mpanjifa?*
Inona no fahalalana SEO misy ao amin'ny orinasa?*
Efa nisy teo aloha eo amin'ny toerana SEO? Raha izany, azafady jereo ny fampiasam-bola haavon'ny.
Under $500 isam-bolana
Under $1000 isam-bolana
Over $1000 isam-bolana
Dia manorata teny fanalahidy na iza rehefa afaka mieritreritra izay tianao mikendry-tserasera. (Keywords dia teny tendrena any Google fa ny tranonkala dia ho hita fa, ohatra "Satan'ny Private Jet Atlanta"*
Mba lisitra rayon sy ny tanàna manokana tianao mikendry. Raha ny lasibatra-pirenena, Mitendre fotsiny any Etazonia*
Firy fanampiny mpanjifa no tianao mba hahazoana iray volana? Mba hametraka maro.*
Moa ve ianao manao hafa karazana barotra. Hamarino rehetra mihatra?*
PPC (Aloavy Per Click)
Hot Lead (Aloavy Per Call)
RTB (Real Time mpanolo-tsaina)
Inona, hoy ianao, no ny fomba mahomby indrindra dokam-barotra?*
Inona, hoy ianao, no ny kely indrindra dokam-barotra mahomby fomba?*
Ve ianao manolotra misy fisondrotana manokana ho mpanjifa vaovao? Raha izany, F'inona izy ireo?*
Iza no ny fifaninanana?*
Inona no teti-bola isan-karazany noho ny mahazo mpanjifa vaovao?*
Inona no lehibe indrindra mampanahy niara-niasa tamin'ny orinasa iray ho an'ny aterineto barotra?*
Zavatra tsy fankatoavana an-tsaha dia ho an'ny tanjona ary tokony havela niova.